RASMI: Borussia Dortmund Oo Shaacisay In Jadon Sancho U Wareegay Manchester United - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Borussia Dortmund Oo Shaacisay In Jadon Sancho U Wareegay Manchester United
RASMI: Borussia Dortmund Oo Shaacisay In Jadon Sancho U Wareegay Manchester United
Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in xiddigeeda Jadon Sancho uu si rasmi ah ugu wareegay kooxda horyaalka Premier League ee Manchester United.
Dortmund ayaa sheegtay, in ay jeclaan lahaayeen in ay sii haystaan Jadon Sancho laakiin uu uu ciyaaartoygu doonayay in uu u wareego Manchester United.
In ka badan 12 bilood oo ay daba socotay kaddib, United ayaa ku guuleysatay saxeexa Jadon Sancho oo ay ka bixisay lacag dhan £73.1 milyan oo Gini, sida ay sheegtay Dortmund, taas oo aad uga hoosaysa lacagtii sannad ka hor ay kooxda reer Germany tanaasulka ka samayn weyday oo ahayd £108 milyan oo Gini.
War-saxaafadeed ay Borussia Dortmund ku daabacday webstie-keeda maanta ayay ku xaqiijisay, in xiddigii ay hore ugala soo wareegtay Manchester City ee Jadon Sancho uu ka tegay, una wareegay Man United.
“Ciyaartoyga Jadon Sancho, waxa uu ka tegayaa Borussia Dortmund Gmbh& Co.KGaA (“BVB”), waxaanu u wareegayaa Manchester United. Labada kooxood ayaa maanta gaadhay heshiis, waxaanay United bixin doontaa lacag cayiman oo ah 85.0 milyan Euro.” Ayay Borussia Dortmund ku tidhi war-saxaafadeedka.
Dortmund waxa kale oo ay sheegtay in hadda la dhamaystirayo saxeexyada qandaraasyada iyo dhukumentiyada loo baahan yahay, isla markaana uu ciyaartoygu mari doono dhamaan tijaabooyinka caafimaad iyo shaybaadhada loo baahan yahay.
Jadon Sancho ayaa la sheegay in Manchester United uu ka dalbaday No. 7 oo uu hadda xidho Edinson Cavani, ayna isla qaateen kooxdiisa cusub in looga saaro laacibkaas oo sannadkii hore dhabarka ku sitay.
Sancho oo noqonaya ciyaartoygii labaad ee Ingiriis ah ee ugu qaalisan taariikhda, kuna xiga Harry Maguire oo £80 milyan oo Gini ay ku iibsatay Manchester United waxa uu toddobaadkii mushahar u qaadan doonaa £250,000 Gini.